Uhlaziyo lwamva: IOS 13.6, iwOSOS 6.2.8 kunye neKhayaPod 13.4.8 | IPhone iindaba
Lungisa uqhagamshelo lwakho lweWiFi kuba iApple isungule iphakheji entsha yohlaziyo ebandakanya IOS 13.6, iwotsOS 6.2.8 yeApple yethu yokubukela kunye neaudioOS 13.4.8 yeKhayaPodkunye ne-macOS 10.15.6 kunye ne-tvOS 13.4.8.
Uhlaziyo kwi-iOS 13.6 luza neendaba ezithile ezinje ngendlela esinokuthi sikhethe ngayo ukufaka uhlaziyo kwizixhobo zethu. Kude kube ngoku sinokukhetha ukukhuphela ngokuzenzekelayo, kodwa ngoku siza kuba namacandelo amabini ahlukeneyo kwicandelo le- "Useto> Ngokubanzi> uHlaziyo lweSoftware", apho sinokumakisha khona ukhetho oluzenzekelayo kwaye ukuba sinqwenela, ukufakelwa okuzenzekelayo. Kwakhona kubandakanya ezinye Iindaba kwisicelo seMpilo esikuvumela ukuba ungeze iimpawu ezintshaezinjengeentloko, ukugodola okanye umqala obuhlungu, kunye neApple News + Audio entsha, efumaneka eUnited States kuphela. Isitshixo seMoto, umsebenzi omtsha okuvumela ukuba uvule imoto yakho nge-iPhone, nayo iza nale nguqulelo intsha ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube nenye yeemodeli zeBMW ezihambelanayo ngalo mzuzu.
Uhlaziyo kwi-watchOS 6.2.8 luzisa Isitshixo seMoto kwi-Appel Watch, kuphela kwimodeli yesi-5. Azisekho iindaba malunga noku kuhlaziywa kwi-Apple Watch, ngaphandle kokufumaneka kwe-ECG kumazwe amathathu amatsha anjengeBahrain, iBrazil kunye noMzantsi Afrika. Iindaba eziza nohlaziyo lwePodPod yasekhaya nazo azaziwa, nangona zinokusombulula ezinye zeempazamo abasebenzisi abaninzi abakhalaza ngazo mva nje. Ngelixa ulinde uhlaziyo olulandelayo ukuba lufike oluza kuxhasa iinkonzo zomculo wesithathu, akukho ndaba ziphambili ezilindelweyo kude kube lelo xesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » Uhlaziyo lwamva: iOS 13.6, iwOSOS 6.2.8 kunye neKhayaPod 13.4.8
IGreyhound kaTom Hanks ibekwa njengeyona iphambili ye-Apple TV +